> Resource > DVD > Wedding DVD Muqaal - kaamilo Wedding DVD Muqaal in qasabno
Maalin Wedding waa mid ka mid ah maalmaha ugu muhiimsan ee ku jira nolosha. Lamaane badan ayaa doonaya inay sawirada ay soo koraysay iyo sawiro ku wada tusin. Iyo Lamaano badan guurkiisii ​​doonayaan inay DVD slideshow aroos ka photos arooska iyo videos si ay u daawatid on TV ama iyaga la dad badan wadaagaan ama si ay u dhawrto kuwa xusuus arooska daqiiqado.
DVD Wedding duubey waa keepsakes qaali ah, aroosyada. Adigu weligaaba ilaalin karaa daqiiqado aad xusuus by jeestay jecel arooska sawiro iyo filimo ka galay professional DVD arooska slideshow.
DVD Slideshow Builder Deluxe waa xirfadle arooska software DVD slideshow si ay u abuuraan kaamil ah DVD duubey arooska iyo sawirada arooska keeno weli nolosha! Iyadoo 480+ Hababka dhisay-in free Hollywood-sida filim, oo ay ku jiraan pack style arooska lacag la'aan ah, in aad filimada guriga qurux badan u noqon kartaa sawiro arooska iyo videos iyo DVD slideshow aroos gubi.
Just free download DVD software arooska slideshow iyo raacdo tallaabada si aad aroos u gaar ah DVD slideshow loo ilaalin iyo wadaagaan arooska sawir iyo video xusuus!
Sida loo sameeyo arooska DVD slideshow ah shakhsi
Talaabada 1: dejinta aad sawiro arooska iyo videos in gaare DVD arooska slideshow ah
Dooro sawirada arooska iyo videos in aad rabto in aad ku gubi, ka dibna riix "Add Faylal ay" si ku shuban files barnaamijka. Waxaad u abuuri karaan oo gubi dhowr arooska slideshow hal mar. Haddii aad rabto, inaad ku labanlaabtaa karaa guji sawirka ama video clip ah in xaalkaa sawir ama video. Ku dar qaar ka mid ah laga cabsado arooska heeso music sida asalka ah ee DVD arooska aad.
Talaabada 2: Codso Hababka movie arooska iyo qurxinta aad DVD slideshow arooska
Waxaa jira 480+ Hababka filimka lacag la'aan ah waxaa ka mid ahaa in this software slideshow DVD , kaliya dooran Hababka aad rabto in aad DVD arooska slideshow dheeraad ah oo cajiib ah. Waxaad riix kartaa in ay ku eegaan Hababka oo ku saabsan suuqa kala xaq u arkaysid oo ku jiidin sawiro ku saabsan storyboard ah. Ka sokow, in badan oo xubno ka decoration sida cliparts lacag la'aan ah, saamaynta, dhawaaqa, iwm, waxaa la siiyaa si aad slideshow arooska dheeraad ah oo ku cad. Jiidi fudud mid ka mid ah meesha aad jeclaan lahayd in aad dalbato. Waxa kale oo aad sameyn kartaa filimada Intro aad DVD slideshow arooska.
Talaabada 3: qoraaga ah DVD slideshow arooska menu oo shakhsi ah sida aad jeceshahay
Haddii aad rabto in aad ku gubi slideshow arooska gal DVD, ka dibna waxa loo baahan yahay in qorayaasha DVD arooska menu xirfad leh. Si fudud double-riix template DVD arooska menu ku saabsan dhinaca bidix si aad u codsato in aad DVD slideshow arooska. Asalka, music soo jeeda, thumbnails, Hababka jir, badhamada, iwm waa inaad. Oo waxaad iyaga u astaysto si xor ah kula mid aad ugu jeceshahay.
Talaabada 4: Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh iyo gubi DVD slideshow arooska
Marka aad dhamaysid qaadashada slideshow arooska, hadda waxa la joogaa wakhtigii si ay u gubaan aad slideshow arooska gal disc ama abuuro video qaabab kala duwan. Eeg shaashada ku qoran:
Talooyin : Sidoo kale, waxaad dooran kartaa qaab kale sida video "AVI", "Wmv" ama "MPEG-2" kuwaas oo ay taageerayaan on YouTube ama MySpace oo qaybsada on YouTube ama Blog si ay dhammaan dunida daawan kartaa liibaan iyo diri rabitaanka ugu fiican aad.
Windows DVD Kan sameeyey No Sound Marka Gubasho DVDs? Xalliyo.
Sida loo Beddelaan ASF in DVD